နတ်ကိုးကွယ်မှု ပပျောက်ရေးအဖွဲ့ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
ဒီနေ့ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ နတ်ကိုးကွယ်တာတွေ ရှိနေတုန်းပါပဲ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ နတ်ကိုးကွယ်မှု လျော့ချရေး၊ လျော့နည်းသွားရေး၊ ပပျောက်ရေးတို့ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းမှာ တာဝန်ရှိသည်နှင့်အညီ ဤအဖွဲ့လေးအားဖွဲ့စည်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှု= Dec 28, 2013
နတ်နှင့် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
သုဂတိအဟိတ်နတ်များသည် သေးသိမ်သော ရှေးကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်ရ၏။ နတ် ဆိုရရုံသာ။ တန်ခိုးမရှိ ဘုံဗိမာန် သီးခြားမရှိ။ဘုမ္မစိုး ရုက္ခစိုးနတ်ကြီးများကို မှီခို၍ ထိုနတ်ကြီးများ၏ ဗိမာန်အနီးအပါး၌ နေကြရသည်။ အစားအသောက်လည်း ကျကျနနမရှိ။ အစိမ်းတစ္ဆေများကဲ့သို့ ထမင်းလုံးဟင်းပေါက်ကို ကောက်ယူစားသောက်ကြရ၏။တခါတရံ သမာဓိနည်းပါးသော မိန်းမများနှင့် ကလေးများကို ခြောက်လှန့်ပူးကပ်၍ ထိုသူတို့ပစ်အပ်သော တစ္ဆေစာ(ခေါစာ) ကိုပင် စားသောက်ကြရသည်။ အမျိူးအစားအားဖြင့် စတုမဟာရာဇ် နတ်မျုိးပင်တည်း။
စတင်ရေးသားခဲ့သူ နီစံ (အနီ). ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးချက် မှာ ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်) Jul 21, 2012.3Replies3Likes
သူရိယ မှ တဆင့် ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည်။အမရပူရ မဟာဂန္တာရုံ မဟာဇနကာဘိဝံသ ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာ ၁၃၁၃-ခု ကဆုန် လဆန်း ၁-ရက်နေ့ ညဉ့် ၇-နာရီ အချိန်က တပ်စခန်းတစ်ခု၌ “ စစ်တပ်နှင့်သာသနာသည် နိုင်ငံတော် အတွက်…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
ywemyattin သည် မတ် 21, 2012 က 5:32pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
shwemahar12 သည် မတ် 4, 2012 က 7:51pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင် ဟောကြားတော်မုသော (အတ္တာဟိ အတ္တနောနာထော) ဆိုတဲ့ သာသနာအဆုံးအမ အနှစ်သာရကို သေသေချာချာသိရင် နားလည်ရင် နတ်ကိုးကွယ်မှုဆိုတဲ့ အရာဟာ ဦးဏှောက်ထဲက လောကထဲက ပျောက်သွားမှာပါ။ ဒါကြောင့် လောကလူသားတွေ နတ်ကိုးကွယ်မှု အယူမှားတွေက လွတ်မြောက်အောင် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပန်းကြပါစို့
မှူးအိမ်ဇော် သည် ဖေဖော်ဝါရီ 23, 2012 က 3:07pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
မှူးအိမ်ဇော် သည် ဖေဖော်ဝါရီ 23, 2012 က 2:58pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
Thukha Nadi သည် ဖေဖော်ဝါရီ 16, 2012 က 6:33amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
တကယ်တော့ နတ်ကိုးကွယ်ကြတဲ့သူတွေဟာ အယူလွဲ ၊ အစွဲလွဲပြီး အားကိုးမှားနေကြတာပါ။
ကံ နှင့် ကံ ရဲ. အကျိုးပေး ကိုသေသေချာချာ မသိကြလို့ပါ။ သူတို့ အားကိုးနေကြတဲ့ အဲဒိနတ်တွေက သူတို့ ရဲ. ပြုခဲ့ပြီးသောကံ၊ ပြုလတ္တံ.သောကံတွေကိုကျော်ပြီးဘာမှ လုပ်ပေးလို့ မရဘူးဆိုတာကို မသိကြပါဘူး။
kyawswar သည် ဖေဖော်ဝါရီ 6, 2012 က 12:02pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
A BuddhismworldAdmin သည် ဖေဖော်ဝါရီ 2, 2012 က 11:25pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
ဘုရားမှတပါးကိုးကွယ်ရာမရှိ။(ဘု၇ားဆိုတာသစ္စာလေးပါးကို ဆရာမကူပဲကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူတာကို ဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်)နတ်မပြေားနဲ့ကျန်တာဘာမှကိုကွယ်အားထားစ၇ာမရှိ နတ်ကိုင်ပလေ့စေလာခဲ့ပါ ကျနော်ဂရုမစိုက်ပါ။
naynay သည် ဖေဖော်ဝါရီ 2, 2012 က 10:47pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်) သည် ဇန်န၀ါရီ 28, 2012 က 11:17amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
လူ သည် ဇန်န၀ါရီ 26, 2012 က 11:21pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
လူက ဘာမှ သိပ်မလုပ်တတ်လို့ သူငယ်ချင်းများမှ ကူညီ ရေးသားပေးကြပါနော်။